Xarunta Ibnu Baaz ee Dacwada & hanuuninta
Xafladda xiritaanka Seminaarka saxaafadda
Waxaa khamiistii lasoo dhaafay ee taariikhduna ahayd 11/09/03 lagu soo gabagabeeyay Xarunta Ibnu Baaz ee dacwada & hanuuninta ee ku yaal magaalada Muqdisho Seminaar ku saabsan xirfadaha saxaafadda oo socday muddo 7aad ah.
1- Soo saarista xirfadlayaal saxaafadeed oo buuxiya baahida warbaahineed ee bulshadeenna.
2- Isku xirka maabaadi’da ummaddeenna & aqoonta saxaafadda.
3- In lagu baraarugo hagardaamooyinka warbaahineed ee lagu hayo bulshadeenna & siyaabaha looga hortagi karo.
4- In la xoojiyo kaalinta warbaahinta Islaamiga ah, loona helo kaadir ka hawl gala.
Seminaarka waxaa duruus ka bixiyay 7 macallin oo ugu deeqay aqoontooda & waqtigooda siday ugu faa’iidayn lahaayeen dadkooda. Duruusta lagu qaatay Seminaarkaan waxaa ka mid ah: Tifaftirka saxaafadeed, Ahmiyadda warbaahinta, Shuruudda sharciga ah ee wartabinta, saamaynta Ra’yilcaamka iyo kuwa kale.
Gabagabadiina waxaa Markazku ugu baaqayaa aqoonyahanka Soomaaliyeed inay dadkooda uga faa’iideeyaan takhasusyada kala duwan ee ay leeyihiin. Dadwaynahana wuxuu ugu baaqayaa inay uga faa’iidaystaan waqtigooda wax ay ku anfacaan naftooda & ummaddoodaba.
Qore: xuseen c/rashiid shxuseen@hotmail.com